Nice Guy ရောဂါလက္ခဏာ။ fappers / porn အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောပြissueနာ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
nice Guy Symdrome ။ fappers / ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စ။
-Nice Guy Symdrome Threading TO သို့ LINKT ။ fappers / ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စ။
အခုငါ Nice Guy Symdrome အကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေတယ်။ စာရေးသူကတော့ငါနင့်ကိုမျှဝေချင်တဲ့“ Nice Guys” ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများစွာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် NoFap စိန်ခေါ်မှုမတိုင်မီက Nice Guy တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုငါပြောင်းလဲနေပြီ။ ခင်ဗျားယောက်ျားတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီစရိုက်လက္ခဏာများစွာနဲ့ခွဲခြားသိမြင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ စာရေးသူမသိသည့်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ“ Nice Guy Syndrom” သည် fapping နှင့်လုံးဝဆက်စပ်နေသည်။ ငါ့ကိုဒီ shit ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်နှင့် NoFap ကိုငါကျေးဇူးတင်သည်။ သွားပြန်ပြီ:
nice ယောက်ျားများလှူကြသည်။ nice ယောက်ျားများမကြာခဏကအခြားသူများအားပေးစေခြင်းငှါသူတို့ကိုကောင်းသောခံစားရစေသည်ဖော်ပြ။ ဤလူတို့သည်ကျရောသူတို့ဘယ်လောက်ကောင်း၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ခြင်းနှင့်အခြားလူများကသူတို့ကိုချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားစေမည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
nice ယောက်ျားများ fix နှင့် caretake ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ် အကယ်. တစ်ဦးလိုအပ်ရှိပါတယ်, အမျက်ထွက်စိတ်ဓာတ်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, Nice ယောက်ျားများမကြာခဏ (များသောအားဖြင့်မေးမွနျးခံရမပါဘဲ) အခြေအနေကဖြေရှင်းဖို့သို့မဟုတ် fix ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
nice ယောက်ျားများအခြားသူများထံမှခွင့်ပြုချက်ရှာကြာလော့။ Nice Guy Syndrome ၏တစ်လောကလုံးစရိုက်မှာအခြားသူများထံမှအတည်ပြုခြင်းကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်။ Nice Guy တစ်ယောက်လုပ်သမျှပြောသမျှအရာအားလုံးသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏မျက်နှာသာရရန်သို့မဟုတ်သဘောမကျမှုကိုရှောင်ရှားရန်တွက်ချက်ထားသည့်အဆင့်တွင်ရှိသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်မှန်ကန်သည်။
nice ယောက်ျားများပဋိပက္ခရှောင်ကြဉ်ပါ။ nice ယောက်ျားများချောမွေ့မိမိတို့၏ကမ္ဘာတွင်စောင့်ရှောက်ရန်ရှာကြာလော့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သူတို့ကလှေကိုကျောက်သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုကမောက်ကမအံ့သောငှါအမှုအရာလုပ်နေတာရှောင်ကြဉ်ပါ။
nice ယောက်ျားများသူတို့ရိပ်မိအားနည်းချက်တွေကိုနှင့်အမှားတွေကိုဖုံးကွယ်ရမယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဤသူတို့သညျကိုအခြားသူများသူတို့ကိုမှာအရူးရသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောအမှားသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်ထိတွေ့လျှင်သူတို့ကိုချန်ထားမည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။
Nice ယောက်ျားများသည်အရာရာကိုလုပ်ရန်“ မှန်ကန်သော” နည်းလမ်းရှာသည်။ nice ယောက်ျားများတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာ, ပြဿနာ-အခမဲ့ဘဝရှိခြင်းရန်သော့ချက်လည်းမရှိယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသာအရာခပ်သိမ်းလုပ်ဖို့နည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုထုတ်တွက်ဆနိုင်လျှင်, ဘာမျှအစဉ်အဆက်ကမှားသွားပါသင့်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
nice ယောက်ျားများဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်။ nice ယောက်ျားများမဟုတ်ဘဲခံစားထက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအချိန်နှင့်စွမ်းအင်တစ်ခုစွန့်ပစ်အဖြစ်ခံစားချက်တွေကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏတစ်ခုပင် Keel အပေါ်သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
nice ယောက်ျားများမကြာခဏသူတို့ဘိုးဘေးကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ကိုမရရှိနိုင်, ပျက်ကွက် passive, အမျက်ထွက်, philandering, ဒါမှမဟုတ်အရက်ဘိုးဘေးတို့ရှိခြင်းအတော်များများ Nice ယောက်ျားများအစီရင်ခံစာ။ ဒီလူအဖေကနေမတူညီတဲ့ 180 ဒီဂရီဖြစ်ရန်ကြိုးစားသူတို့၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ဘို့ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး။
nice ယောက်ျားများမကြာခဏယောက်ျားထက်မိန်းမတို့အားသက်ဆိုင်သောပိုပြီးအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝအခြေအနေကြောင့် Nice ယောက်ျားများမှာသူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေနည်းပါးတယ်။ Nice ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများ၏ခွင့်ပြုချက်ရရန်မကြာခဏကြိုးစားသည်၊ သူတို့ကအခြားယောက်ျားများနှင့်မတူကြောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်။ သူတို့သည်“ တစ်ခြား” အမျိုးသားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်း၊
nice ယောက်ျားများအခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဦးစားပေးလုပ်ရှိသည်။ ဤအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦး စားထားခြင်းသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည်ဟုခံစားရလေ့ရှိသည်။ အခြားသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်နေရာတွင်ထားခြင်းသည်သီလဖြစ်သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်။
nice ယောက်ျားများမကြာခဏသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုစင်တာပါစေ။ အတော်များများက Nice ယောက်ျားများဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ပျော်ရွှင်လျှင်သူတို့သာပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကမကြာခဏသူတို့၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ Nice Guy Syndrome ၏ပြဿနာကို minimize လုပ်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဘယ်လိုဖြစ်လျက်ရှိကောင်းတဲ့ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နိုင်သလဲ ရုပ်ပြ strips တွေနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲပုံဖော်အဖြစ်ကျနော်တို့တောင်မှဒီလူများ၏ Marvin Milquetoast အပြုအမူတွေမှာ chuckle ပေလိမ့်မည်။ ယောက်ျားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလွယ်ကူသောပစ်မှတ်ကိုယ်စားပြုကတည်းကတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကောင်လေး၏ရုပ်ပြောင်ကာအပန်းဖြေ၏အရာဝတ္ထုထက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
Nice ယောက်ျားများကိုယ်တိုင်သည်သူတို့၏ယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများ၏နက်ရှိုင်းမှုနှင့်လေးနက်မှုကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်များရှိသည်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဤလူတို့နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သောအခါခြွင်းချက်မရှိဘဲသူတို့အားလုံးက“ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဘာမှားပါသနည်း” ဟုမေးကြသည်။ ဤစာအုပ်ကိုကောက်ယူပြီးခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးနောက်သင်အတူတူပင်တွေးမိနိုင်သည်။
ဒီလူတွေကို Nice Guy တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါသည်သူတို့၏အမှန်တကယ်အပြုအမူကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သူတို့နှင့်သူတို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အဓိကယုံကြည်မှုစနစ်ကိုငါပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည်“ ကောင်းသည်” ဆိုပါကသူတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးမည်၊ လိုအပ်ရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးချောမွေ့သောဘဝရှိလိမ့်မည်ဟုထိုအမျိုးသားများကယုံကြည်ထားသည်။
Nice ယောက်ျားများမကြာခဏကောင်းတဲ့ပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါအသုံးအနှုန်း Nice Guy အမှန်တကယ်တစ် misnomer ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင် Nice ယောက်ျားများအချို့-ဒီတော့-Nice မတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနေသောခေါင်းစဉ်:
nice ယောက်ျားများမရိုးမသားဖြစ်ကြ၏။ ဤသူတို့သညျ, ပဋိပက္ခရှောင်ရှား, သူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုဖုံးကွယ်သူတို့ကလူကြားချင်ထင်အဘယ်သို့ဆိုလျက်, သူတို့ခံစားချက်များကိုဖိနှိပ်။ ဤရွေ့ကားစရိုက်များ Nice ယောက်ျားများအခြေခံကျကျမရိုးသားပါစေ။ nice ယောက်ျားများလျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကခွင့်ပြုချက်ရဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အတွက် Nice ယောက်ျားတွေကဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ထင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖုံးကွယ်ထားလိမ့်မယ်။ Nice Guy ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ“ အကယ်၍ မင်းကအစမအောင်မြင်လျှင်သက်သေသာဓကကိုဖုံးကွယ်ထားပါ။ ”
nice ယောက်ျားများ compartmentalized နေကြသည်။ nice ယောက်ျားများဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ဦးချင်းအခန်းသို့သူတို့ကိုငါခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏ဆန့်ကျင်သည်အပိုင်းပိုင်းညီမှာအစွမ်းရှိပါတယ်။ သူကသူမ၏လိင်အင်္ဂါ၌သူ၏လိင်တံထားဘယ်တော့မှကြောင့်တစ်ဦးလက်ထပ်ယောက်ျားသည်သူ့ကိုသူသညျမိမိအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်) နှင့်ဇာတ်ခင်းခဲ့ငြင်းပယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့သစ္စာ၏သူ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
nice ယောက်ျားများအသုံးချကစားကြသည်။ nice ယောက်ျားများဟာဦးစားပေး၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အောင်ခဲအချိန်ရှိသည်နှင့်အခက်အခဲသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းလိုချင်တာတွေတောင်းရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအခိုးမရှိဘူးတဲ့သဘောမျိုးဖန်တီးပေးပါတယ်။ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ရရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါထိုကွောငျ့, သူတို့မကြာခဏကိုင်တွယ်နှုနျး။
nice ယောက်ျားများထိန်းချုပ်ထားရသည်။ Nice ယောက်ျားများအဘို့အဖြေကိုအဓိကဦးစားပေးချောမွေ့မိမိတို့၏ကမ္ဘာတွင်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ကိုပတ်လည်ရှိလူများနှင့်အရာတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လိုအပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
nice ယောက်ျားများရဖို့ပေး ။ Nice ယောက်ျားများရက်ရက်ရောရောလှူဖြစ်လေ့သော်လည်း, သူတို့ရဲ့ပေးကမျးမကြာခဏပူးတွဲသတိလစ်ခြင်းနှင့် unspoken ညှို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့စသည်တို့ကို Nice ယောက်ျားများမကြာခဏထင်ရသောပြန်နိုင်အောင်နည်းနည်းလာပြီစဉ်ဤမျှလောက်ပေးခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်စိတ်ပျက်သို့မဟုတ်နာကြည်းခံစားသတင်းပို့, သူတို့ကတစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုအမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ချင်အပြန်အလှန်အချို့ကြင်နာချင်တန်ဖိုးထားခံရဖို့ချင်တယ်။
nice ယောက်ျားများ passive-ရန်လိုရှိပါသည်။ nice ယောက်ျားများသွယ်ဝိုက်, အဝိုင်းမဟုတ်, ဒါကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်မကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကတစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်ဖြစ်ခြင်းလည်းလျင်မြန်စွာ climaxing, သူတို့သည်နောက်တဖန်သူတို့ကိုလုပ်ပေးဘယ်တော့မှရန်ဂတိထားသောလျှင်ပင်အတူတူပင်နှောင့်အယှက်အပြုအမူတွေထပ်ဘဲ, မှတစ်ဆင့်အောက်ပါမဟုတ်နှောင်းပိုင်းဖြစ်ခြင်း, မေ့လျော့, ကိုမရနိုင်ပါဖြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
nice ယောက်ျားများဒေါသအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ Nice ယောက်ျားများမကြာခဏအမျက်ထွက်ရတဲ့အစဉ်အဆက်ငြင်းပယ်သော်လည်းစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်မကျေနပ်မှုများတစ်ဦးတစ်သက်တာနက်ရှိုင်းသောဤလူတို့သညျအထဲမှာဖိနှိပ်ဒေါသတစ်ဖိအား cooker ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဤသည်ဒေါသအများဆုံးမျှော်လင့်မထားတဲ့နှင့်ထင်ရသောမသင့်လျော်အဆအချို့မှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှကြတယ်။
nice ယောက်ျားများစွဲလမ်းကြသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူစိတ်ခံစားမှုပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှု, သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာကျင်မှုသက်သာရာ၏ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Nice ယောက်ျားများအတွင်းပိုင်းအထိယူဂိုဆလားဗီးယားဤမျှလောက်စောင့်ရှောက်ဖို့လေ့ကတည်းကကြောင့်တစ်နေရာရာကိုထုတ်လာပါတယ်။ Nice ယောက်ျားများအဘို့အအသုံးအများဆုံးစွဲလမ်းအပြုအမူတွေတစ်ခုမှာလိင်ကိစ္စ compulsive ဖြစ်ပါတယ်။
nice ယောက်ျားများအခက်အခဲနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးရှိသည်။ Nice Guys တော်တော်များများက "no"၊ "stop" သို့မဟုတ် "ငါသွားမယ်" ဟုပြောရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းတို့သည်အကူအညီမဲ့သူများအဖြစ်ခံစားရလေ့ရှိပြီးအခြားသူကိုသူတို့ကြုံတွေ့နေရသောပြofနာများ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
nice ယောက်ျားများမကြာခဏအထီးကျန်နေကြသည်။ သော်လည်း Nice ယောက်ျားများဟာသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကတကယ်တော့ဒါဟာခက်ခဲလူတွေကသူတို့ကိုရန်အလွန်နီးစပ်ရဖို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကြိုက်တယ်နှင့်ချစ်ခြင်းကိုခံရရန်အလိုရှိကြသည်။
nice ယောက်ျားများမကြာခဏပြုပြင်တာတွေလိုအပျကွောငျးလူများနှင့်အခြေအနေများဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒီအပြုအမူဟာ Nice Guy ရဲ့ကလေးဘဝအခြေအနေ၊ သူ၏ပုံပန်းသဏ္lookာန်လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ရရန်ကြိုးပမ်းမှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤသဘောထားသည် Nice Guys များသည်အချိန်အများစုကိုမီးငြိမ်းသတ်ခြင်းနှင့်အကျပ်အတည်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အချိန်ကုန်စေလိမ့်မည်ဟုသေချာစေသည်။
nice ယောက်ျားများမကြာခဏရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာများရှိသည်။ Nice Guys များသည်သူတို့၏ဘဝ၏ဤအပိုင်းကိုအလွန်တရာအလေးထားလေ့ရှိသော်လည်းသူတို့၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည်ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းတို့၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - l Nice ယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်ကြောက်လန့်သောနားထောင်သူများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အလုပ်များလွန်းသောကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမည်သို့ကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သူတစ်ပါး၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ l ပconflictိပက္ခဖြစ်မည်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်သူတို့သည်မကြာခဏမရိုးမသားဖြစ်ပြီးပြthroughနာတစ်ခုမှတစ်ခုအထိလုပ်ကိုင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ l Nice ယောက်ျားများသည်သူတို့က“ စီမံကိန်းများ” သို့မဟုတ်“ ကြမ်းတမ်းသောစိန်များ” ဟုသူတို့ယုံကြည်သောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးခြင်းသည်မဆန်းပါ။ ဤစီမံကိန်းများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအရောင်မပြောင်းသည့်အခါ Nice Guys သည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားသူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုလမ်းပေါ်တွင်ရပ်တည်နေသည်ဟုအပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။
nice ယောက်ျားများလိင်နှင့်အတူကိစ္စများရှိသည်။ Nice Guys အများစုကလိင်မှုကိစ္စပြhavingနာရှိနေတာကိုငြင်းဆန်ကြပေမဲ့ငါဟာသူ့လိင်ဘဝကိုမကျေနပ်သူတစ်ယောက်နဲ့မတွေ့ရသေးဘူး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (စိုက်ထူမှုမရရှိနိုင်သို့မဟုတ်မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊ အထွတ်အထိပ်မြန်လွန်းသည်) သို့မဟုတ် (လိင်မှုပြုခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းစသည်ဖြင့်) ရှိသည်။
nice ယောက်ျားများများသောအားဖြင့်သာအတော်လေးအောင်မြင်သောဖြစ်ကြသည်။ ငါတွေ့ခဲ့တဲ့ Nice Guys အများစုဟာပါရမီရှိသူ၊ သို့သော်ချွင်းချက်မရှိပဲနီးပါးသည်သူတို့၏အစွမ်းအစနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။ ”
ကိုယ့်ကြိုးကနေအခမဲ့ခြိုးဖကျြ, သငျနှငျ့အတူအချို့သောအတွေးမျှဝေချင်: ငါတစ်ဦးဖြစ်ပညာသင်ကြားခဲ့သည် ကံဆိုးသူ။ ငါ့အဘနဲ့အမေတစ်ဦးအရှုံးသမားဖြစ်ငါ့ကိုပညာတတ်။ သူတို့က, ငါ့မိသားစု၏ကျန်အမြဲသူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ငါ့ကိုချကြကုန်အံ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်။ ငါအရာအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားသည်။ ငါစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်တယ်။ ငါကအရမ်းယဉ်ကျေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ငါယခုနှစ်လေ့ကျင့်ခန်းစတင်ခဲ့, ငါယခုအားကစားအသွင်သဏ္ဌာန်ပါပဲ။ ဘာသာစကားလေးမျိုးပြောတတ်ပါတယ် ငါကြောက်စိတ်များစွာကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ ငါသည်ငါ့ဝိသေသလက္ခဏာ, ငါ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေသည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ငါစွဲလမ်းနေဆဲငါ့အသက်ကိုပျက်စီးခဲ့သည်။ ယခုမူကားငါသည်လည်းဤဒုစရိုက်ကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။ ငါနေ့ ၇၇ တွင်ရောက်နေပြီ။ ကိုယ့်လိုပဲ ငါအရာအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ငါပြောနိုင်တာက - ငါဟာလူသစ်တစ်ယောက်ပါ၊ ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်။